संसदमा भिम रावलको गर्जन : भारतलाई माया गर्ने, सेनालाई काम गर्न नदिने ? (भिडियो) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/संसदमा भिम रावलको गर्जन : भारतलाई माया गर्ने, सेनालाई काम गर्न नदिने ? (भिडियो)
संसदमा भिम रावलको गर्जन : भारतलाई माया गर्ने, सेनालाई काम गर्न नदिने ? (भिडियो)
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रीत भएर बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेता रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सिद्धान्त र चुनौतीहरु केन्द्रीत गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । देश र जनता सुरक्षीत नभइ कुनै पनि काम अगाडी बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै राववले नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाई नभएको बताए ।
ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी सडेर जाने अवस्थामा भारतबाट ट्रकका ट्रक सडक नेपाल भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै रावलले बजेटमा यी कुराहरु समेट्न गम्भिरता देखाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको अवधारणा अघि सारेपनि व्यवहारमा दलाल, नोकरशाही र पूँजीपतिहरुलाई प्रसय दिइएको उनले बताएका छन् ।
काठमाडौंको सडकमानेपाली सेनाको जहाज गुडेपछि पुरै आर्मी प्रहरी सडकमा भिडियो हेर्नुस
भर्खरै हेम राजा थापा प क्राउ परेपछि बानेश्वोरमा ठुलो झ डप ! ज्ञानेन्द्र पनि उत्रिए सडकमा …….(भिडियो सहित)